इतिहास मा 74 सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेल | मलाई फुर्सद दिनुहोस्
सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेल कहिल्यै
इसहाक | 20/12/2021 15:57 | सामान्य
पक्कै पनि तपाइँ तपाइँको परिवार संग, तपाइँको साथी वा तपाइँका साथीहरु संग अनुभव साझा गर्न मनपर्छ। र बैठकहरूको लागि, ती वर्षा वा चिसो दिनहरू, वा पार्टीहरूको लागि, यो भन्दा राम्रो प्रोत्साहन के हो सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेलहरू। त्यहाँ तिनीहरू सबै स्वाद र उमेरका लागि छन्, सबै प्रकारका विभिन्न कोटीहरू र विषयवस्तुहरू। बोरिंग? असम्भव! हामीले यहाँ सिफारिस गरेका यी शीर्षकहरूसँग तपाईंसँग राम्रो समय बित्नेछ।
थप रूपमा, हामी तपाइँलाई बोर्ड गेमहरूको संकलनहरू छोड्छौं जुन हामीले प्रकाशित गर्दैछौं ताकि तपाइँ तपाइँले खोजिरहनु भएको सबै भन्दा राम्रो सूट छनौट गर्न सक्नुहुन्छ:
परिवारको लागि उत्तम बोर्ड खेलहरू
बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेल
उत्तम भूमिका खेल्ने बोर्ड खेलहरू
उत्तम भाग्ने कोठा बोर्ड खेल
1 बोर्ड खेल को प्रकार
1.1 एकल खेलाडी
1.1.1 कार्ड संग त्यागी
1.1.3 मेरो बिरालो बिना छैन
1.1.4 लुडिलो डाकु
1.1.5 अर्खाम नोयर: द विच कल्ट मर्डर
1.2.2 निषेधित टापु
1.2.4 अरमम डराएर
1.2.6 पागलपनको महल
1.2.8 Zombicide र Zombie Kidz Evolution
1.2.9 मिस्टेरियम पार्क
1.2.10 Andor को किंवदंतियों
1.3 वयस्कहरूको लागि बोर्ड खेलहरू
1.4 दुई व्यक्ति वा जोडीहरूको लागि
1.4.1 डिसेट टेट्रिस डुअल
1.4.3 धमाका! द्वन्द्व
1.4.4 Duo गोप्य कोड
1.4.67आश्चर्य ड्युअल
1.5 बच्चाहरूको लागि बोर्ड खेलहरू
1.6 परिवारको लागि बोर्ड खेलहरू
1.7 कार्ड खेलहरू
1.7.1 एकाधिकार सौदा
1.7.2 मुश्किल कीट खेल
1.7.3 Dobble वाटरप्रूफ
1.8.1 क्रस पासाहरू
1.8.3 कथा क्यूब्स
1.8.4 स्ट्रिक खेल
1.9.1 म्याटेल स्क्र्याबल
1.9.5 खजाना मार्ग
1.9.6 साम्राज्य कोब्राको खोजीमा
1.9.7 खाली बोर्ड
1.10.3 चेकर्स खेल
1.10.4 Parcheesi र Goose को खेल
1.10.5 XXL बिंगो
1.10.7 जम्मा भएका खेलहरू
1.11.1 ड्र्यागन बल डेक
1.11.2 डूम द बोर्ड गेम
1.11.3 सिंहासन बोर्ड खेल को खेल
1.11.5 द हिड्ने मृत ट्रिभिया
1.11.6 इन्डियाना जोन्स टावर
1.11.8 पार्टी र कम्पनी डिज्नी
1.11.10 जुरासिक विश्व
1.11.11 ला कासा डी papel
1.11.12 मार्वल शोभा
1.11.13 क्लुएडो द बिग बैंग थ्योरी
1.11.14 एक कि तानो
1.11.15 तुच्छ ह्यारी पोटर
1.11.16 टिभियल लर्ड अफ द रिङ्स
1.11.17 स्टार वार्स सेना
1.11.18 टिब्बा साम्राज्य
1.12 रणनीति बोर्ड खेलहरू
1.12.1 ERA मध्य युग
1.12.3 गोधूलि ईम्परियम
1.12.4 मूल रणनीति
1.12.5 क्लासिक जोखिम
1.12.6 डिज्नी खलनायक
1.12.8 महान युद्ध शताब्दी संस्करण
1.12.9 संस्मरण। 44
1.12.10 Imhotep: इजिप्ट को निर्माता
1.12.11 क्लासिक शहरहरू
1.13 अनलाइन र नि: शुल्क
1.13.1 नि: शुल्क खेल वेबसाइटहरू
1.13.2 मोबाइल उपकरणहरूको लागि अनुप्रयोगहरू
2.1 बोर्ड खेल एस्केप कोठा
2.2 जुएगोस डी रोल
3 उत्तम बोर्ड खेल कसरी छनौट गर्ने
बोर्ड खेल को प्रकार
यी इतिहासमा सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेलहरू, विभाजित छन् कोटिहरू र विषयवस्तुहरू द्वारा। तिनीहरूसँग प्रशस्त रमाईलो पलहरू नगर्नको लागि कुनै बहाना छैन:
यी एक्लो र अल्छी, तपाईंसँग सधैं एक जोडी खेलहरू हुन सक्दैन, वा तिनीहरू सधैं खेल्न इच्छुक छैनन्, त्यसैले यी एकल खेलाडी खेलहरू मध्ये कुनै एकलाई समात्नु उत्तम हुन्छ:
कार्ड संग त्यागी
फोर्नियर - डेक ...
ताशको डेक, कार्ड खेल्ने, ...
डेकले तपाइँलाई समूहमा खेल्न मात्र अनुमति दिँदैन, तपाइँ पनि सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो एक्लोपन शुद्ध विन्डोज शैलीमा, तर तपाईंको टेबलमा, र तपाईंको रोजाइको डेकको साथ, फ्रेन्च वा स्पेनिश। तपाईंलाई विचलित गर्न र निष्क्रिय घण्टाहरू भर्ने खेल।
कार्डहरूको स्पेनी डेक किन्नुहोस् कार्डहरूको फ्रान्सेली डेक किन्नुहोस्
शुक्रबार मात्र एक खेलाडी चाहिन्छ, र यो एक कार्ड खेल हो। एकल साहसिक जहाँ तपाईं मात्र खेल जित्न सक्नुहुन्छ। यो खेलले तपाईंलाई रोबिन्सनको बारेमा कथामा डुबाउँछ, जो तपाईंको टापुमा जहाज भत्किएको छ र तपाईंलाई धेरै खतराहरू र समुद्री डाकूहरू विरुद्ध लड्न मद्दत गर्नुपर्दछ।
मेरो बिरालो बिना छैन
ककटेल खेल बिरालो, ...
यो अन्य खेल पनि एकल खेलाडीको लागि डिजाइन गरिएको हो, यद्यपि तिनीहरूले4सम्म खेल्न सक्छन्। यो सरल छ, यो कार्ड संग खेलिन्छ। लक्ष्य भनेको बिरालाको बच्चालाई मार्गदर्शन गर्नु हो ताकि यो सडकबाट बाहिर निस्कन राम्रो न्यानो ठाउँमा पुग्न सक्छ। यद्यपि, शहरी भूलभुलैया पार गर्न सजिलो हुनेछैन ...
मेरो बिरालो बिना किन्नुहोस्
लुडिलो - ब्यान्डिट गेम अफ...
यो एक धेरै सरल कार्ड खेल हो, बच्चाहरु को लागी पनि। तिनीहरूले 1 खेलाडीबाट4सम्म मात्र खेल्न सक्छन्। र तपाईंले यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि भाग्न खोज्ने डाकु यसबाट भाग्न सक्दैन। पत्रहरूले यसलाई समात्ने बाटो अवरुद्ध गर्नेछ। सबै सम्भावित निकासहरू बन्द भएपछि खेल समाप्त हुनेछ।
अर्खाम नोयर: द विच कल्ट मर्डर
लुडोनोभा - अर्खाम नोयर: ...
HP Lovecraft को शानदार डरावनी कथाहरू द्वारा प्रेरित खेल। यो वयस्कहरूको लागि विशेष शीर्षक हो जसमा यो एक्लै खेलिन्छ। यसको इतिहासको सन्दर्भमा, यो बाहिर जान्छ कि Miskatonic विश्वविद्यालयका धेरै विद्यार्थीहरू मृत फेला परेका छन्। यी विद्यार्थीहरूले जादूसँग सम्बन्धित विषयहरूको अनुसन्धान गरिरहेका थिए र तपाईंले कार्डहरूको यो खेलको साथ तथ्यहरूको जरासम्म पुग्नै पर्छ।
Arkham Noir किन्नुहोस्
यदि तपाई के चाहानुहुन्छ भने पालनपोषण टोली भावना, सहयोग कौशल विकासको अलावा, यी सहकारी बोर्ड खेलहरू भन्दा के राम्रो छ:
8 वर्ष पुरानो देखि सबै उमेरका लागि उपयुक्त सहयोग खेल। यसमा तपाईंले एउटा रहस्य समाधान गर्नुपर्नेछ, र सबै खेलाडीहरू सँगै जित्न वा हार्नेछन्। लक्ष्य भनेको प्रेतवाधित हवेलीमा घुम्ने आत्माको मृत्युको बारेमा सत्य पत्ता लगाउनु हो। तब मात्र तिम्रो आत्माले शान्ति पाउन सक्छ।
रहस्यमय टापुबाट केही बहुमूल्य वस्तुहरू पुन: प्राप्ति गर्न सबैले सँगै काम गर्नुपर्छ। तर यो सजिलो हुनेछैन, किनकि टापु बिस्तारै बिस्तारै डुब्दैछ।4निडर साहसीहरूको जुत्तामा जानुहोस् र पानी मुनि गाडिनु अघि पवित्र खजानाहरू सङ्कलन गर्नुहोस्।
बुध - खेल को ...
समूहहरूको लागि एक आदर्श सहकारी खेल र सम्पूर्ण परिवारको लागि उपयुक्त। तिनीहरूले2देखि 12 खेलाडीहरू खेल्न सक्छन्। यसले 176 कार्डहरू समावेश गर्दछ जसले तपाईंलाई खानीमा सुनको उच्चतम प्रतिशत प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। खेलाडीहरू मध्ये एक तोडफोडकर्ता हो, तर बाँकीलाई थाहा छैन ऊ को हो। उसको अगाडि स्वर्ण जित्ने लक्ष्य छ ।
काल्पनिक उडान - अर्खाम ...
यो एउटै Arkham Noir कथा, र उही सेटिंग मा आधारित छ। तर यो तेस्रो संस्करण हो जसमा नयाँ सामग्री, नयाँ रहस्यहरू, थप पागलपन र विनाश, र थप दुष्ट प्राणीहरू छन् जसले सुतिरहेका दुष्टहरूलाई जगाउने प्रयास गर्नेछन्। खेलाडी एक अन्वेषक हुनेछ जसले यस प्रकोपबाट बच्नको लागि प्रयास गर्नेछ जुन अन्य खेलाडीहरू र दिइएका सुरागहरूको मद्दतले विश्वभर फैलिन्छ।
अर्खाम डरावनी किन्नुहोस्
हबा ३०२३८७ खेल...
यो चार वर्षको उमेरदेखि साना बच्चाहरूको लागि डिजाइन गरिएको सहयोग खेल हो, यद्यपि वयस्कहरूले पनि भाग लिन सक्छन्। Haba Hamster गिरोहको लक्ष्य जाडोको लागि सबै आवश्यक खाद्य आपूर्तिहरू जम्मा गर्न मद्दत गर्नु हो। सबै प्रकारका विवरणहरू, विशेष विशेषताहरू (ह्वील, वैगन, मोबाइल लिफ्ट ...), आदि सहितको बोर्डमा।
अर्को सहयोग शीर्षक जसले तपाईंलाई अर्खामको बीउ गल्लीहरू र हवेलीहरूमा डुबाउँछ। त्यहाँ लुकेका रहस्यहरू र डरलाग्दो राक्षसहरू छन्। केही पागल र संस्कृतिवादीहरूले यी भवनहरू भित्र प्राचीनहरूलाई बोलाउन षड्यन्त्र गरिरहेका छन्। खेलाडीहरूले सबै अवरोधहरू पार गर्न र रहस्य खोल्नु पर्छ। सक्षम हुनेछ?
पागलपन को हवेली किन्नुहोस्
समयको लागि उपयुक्त शीर्षक। एउटा मनोरञ्जनात्मक बोर्ड गेम जसमा विशेष रोग नियन्त्रण टोलीका सदस्यहरूले संसारभरि फैलिएका ४ वटा घातक प्लेगहरूको सामना गर्नुपर्छ। उपचार संश्लेषण र मानवता बचाउन सबै आवश्यक स्रोतहरू प्राप्त गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। सँगै मात्र सकिन्छ...
Zombicide र Zombie Kidz Evolution
बिच्छी मास्क - जोम्बी ...
जोम्बी सर्वनाश आइपुगेको छ। त्यसकारण, तपाईंले आफैंलाई सशस्त्र बनाउन र सबै मृतकहरूलाई नष्ट गर्न टोलीको रूपमा काम गर्नुपर्नेछ। प्रत्येक खेलाडीले अद्वितीय क्षमताले सम्पन्न बाँचेको भूमिका लिन्छ, त्यसैले प्रत्येकको आफ्नो भूमिका हुनेछ। यसरी तपाईले संक्रमित भीडसँग लड्नुहुनेछ। थप रूपमा, यसमा सानाहरूका लागि Kidz संस्करण छ।
Zombicide किन्नुहोस् Kidz संस्करण किन्नुहोस्
लिबेलुड मिस्टेरियम पार्क...
मिस्टेरियम पार्क अर्को उत्कृष्ट सहकारी बोर्ड गेम हो जहाँ तपाइँ आफैंलाई सामान्य मेलामा डुबाउनुहुन्छ, तर जसले अँध्यारो रहस्य लुकाउँछ। यसको पूर्व निर्देशक बेपत्ता भयो, र अनुसन्धान कुनै निष्कर्षमा पुगेन। त्यस दिनदेखि, अनौठो चीजहरू हुन बन्द भएका छैनन् र कोही-कोही विश्वस्त छन् कि तिनीहरूको आत्मा त्यहाँ घुम्छ ... तपाईंको लक्ष्य अनुसन्धान र सत्य पत्ता लगाउने हो र मेला शहर छोड्नु अघि तपाईंसँग6रात मात्र छ।
Mysterium पार्क किन्नुहोस्
Andor को किंवदंतियों
डेभिर - द लिजेन्ड्स अफ...
एक पुरस्कारको विजेता, यो तपाईले किन्न सक्ने उत्कृष्ट सहकारी शीर्षकहरू मध्ये एक हो। प्रसिद्ध चित्रकार माइकल मेन्जेल द्वारा बनाईएको खेल र जुन तपाईंलाई Andor को राज्यमा लैजान्छ। यस क्षेत्रका शत्रुहरू राजा ब्रान्डुरको महलतिर लागिरहेका छन्। खेलाडीहरू नायकहरूको जुत्तामा प्रवेश गर्छन् जसले महलको रक्षा गर्न उनको सामना गर्नुपर्नेछ। र… ड्र्यागनको लागि हेरचाह गर्नुहोस्।
Andor को किंवदंतियों किन्नुहोस्
वयस्कहरूको लागि बोर्ड खेलहरू
किशोरहरूको लागि, साथीहरूको पार्टीहरूको लागि, खर्च गर्न तपाईलाई ख्याल गर्नेहरूसँग सबैभन्दा अचम्मका क्षणहरू। सबै भन्दा राम्रो वयस्क खेल शीर्षक को यो चयन के को लागी हो।
वयस्कहरूको लागि उत्तम बोर्ड खेलहरू हेर्नुहोस्
दुई व्यक्ति वा जोडीहरूको लागि
जब खेलाडीहरूको संख्या केवल दुईमा घटाइन्छ, सम्भावनाहरू सीमित छैनन्। अवस्थित छ खेलाडीहरूको जोडीका लागि असाधारण खेलहरू। केहि उत्कृष्टहरू हुन्:
डिसेट टेट्रिस डुअल
Diset - टेट्रिस डुअल, ...
यो एक बोर्ड खेल हो जसलाई केहि परिचय चाहिन्छ। तपाईंसँग माथिल्लो भागमा स्लट भएको ठाडो बोर्ड छ जसको माध्यमबाट टुक्राहरू फाल्ने। प्रत्येक टुक्रामा लोकप्रिय रेट्रो भिडियो गेमको आकारहरू छन्, र तपाईंले प्रत्येक मोडमा उत्तम तरिकामा फिट हुनुपर्छ।
यो संसारमा सबै भन्दा राम्रो बेच्ने सार बोर्ड खेलहरू मध्ये एक हो। 1987 मा डिजाइन गरिएको, यो आज सम्म पूर्ण रूपमा मर्मत गरिएको छ। तपाईंसँग हेक्सागोनल बोर्ड र केही मार्बलहरू छन्। उद्देश्य भनेको विपक्षीको6मार्बल (उनले राखेको 14 मध्ये) बोर्डलाई फ्याँक्नु हो।
यदि तपाइँ पश्चिमी मनपर्छ भने, तपाइँ यो कार्ड खेल मन पराउनुहुनेछ जुन तपाइँलाई टाढा र जंगली पश्चिममा लैजान्छ जसमा तपाइँ तपाइँको विपक्षीलाई द्वन्द्वमा सामना गर्नुहुनेछ। कानूनका प्रतिनिधिहरू विरुद्ध बन्दी, एक मात्र रहन सक्छ, अर्कोले धूलो टोक्छ ...
Duo गोप्य कोड
यो जोडीमा खेल्दै, सम्पूर्ण परिवारको लागि डिजाइन गरिएको जटिलता र रहस्यको खेल हो। तपाईं छिटो र चतुर हुनुपर्छ, किनकि तपाईं एक जासूस हुनुहुनेछ जसले सूक्ष्म सुरागहरू व्याख्या गरेर रहस्यहरू समाधान गर्नुपर्नेछ। केहि रातो हेरिंग हुन सक्छ, र यदि तपाइँ तिनीहरूलाई अलग बताउन सक्नुहुन्न भने, नतिजाहरू गम्भीर हुनेछन् ...
SD खेलहरू - दावी, रंग ...
राजा मरे, तर यो कसरी भयो कसैलाई थाहा छैन। ऊ वाइन ब्यारेल भित्र उल्टो देखा पर्‍यो। उनले चिनिएका उत्तराधिकारीहरू छोडेका छैनन्। त्यो परिदृश्य हो जसमा खेल सुरु हुन्छ, जसमा दुई चरणहरू हुन्छन्: पहिलो प्रत्येक खेलाडीले अनुयायीहरू भर्ती गर्नका लागि आफ्नो कार्ड प्रयोग गर्नेछ, दोस्रोमा अनुयायीहरूले बहुमत प्राप्त गर्न लड्नेछन्। आफ्नो गुटमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेले जित्छ ।
7 आश्चर्य ड्युअल
Asmodee-7 आश्चर्यहरू: ...
शैलीमा पुरस्कार-विजेता7वंडर्स जस्तै, तर2खेलाडीहरूको लागि डिजाइन गरिएको। समृद्धि र आफ्नो सभ्यता चिरस्थायी बनाउन आफ्नो प्रतिस्पर्धा हराउनुहोस्। प्रत्येक खेलाडीले सभ्यताको नेतृत्व गर्दछ, भवनहरू निर्माण गर्दछ (प्रत्येक कार्डले भवनलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ) र सेनालाई बलियो बनाउन, प्राविधिक प्रगतिहरू पत्ता लगाउन, तपाईंको साम्राज्य विकास गर्न, आदि मद्दत गर्दछ। तपाईं सैन्य, वैज्ञानिक र नागरिक सर्वोच्चता द्वारा जित्न सक्नुहुन्छ।
7 Wonders Duel किन्नुहोस्
बच्चाहरूको लागि बोर्ड खेलहरू
यदि तपाईंसँग छ भने घरमा सानाहरू, तपाईंले तिनीहरूलाई दिन सक्ने उत्कृष्ट उपहारहरू मध्ये एक यी खेलहरू मध्ये एक हो। उनीहरूका लागि राम्रोसँग विकास गर्ने, सिक्ने र केही क्षणका लागि स्क्रिनबाट टाढा रहने एउटा तरिका...
बच्चाहरु को लागि सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेल हेर्नुहोस्
परिवारको लागि बोर्ड खेलहरू
यी तपाईले किन्न सक्नुहुने सबै भन्दा राम्रो हो, पछि सबैले भाग लिन सक्छन्, साथीहरू, तपाईंका छोराछोरीहरू, नातिनातिनाहरू, हजुरबा हजुरआमा, आमाबाबु ... विशेष रूपमा ठूला र धेरै रमाइलो समूहहरूको लागि डिजाइन गरिएको।
उत्कृष्ट पारिवारिक खेलहरू हेर्नुहोस्
को प्रशंसकहरु को लागी juegos de कार्टासयहाँ केहि थप छन् जुन अघिल्लो खण्डहरूमा समावेश गरिएको छैन, र त्यो डेकमा आधारित छ:
एकाधिकार खेल्ने कार्डहरू ...
यो क्लासिक एकाधिकार खेल हो, तर कार्ड संग खेलिएको। द्रुत र रमाइलो खेलहरू जसले भाडा सङ्कलन गर्न, व्यापार गर्न, सम्पत्ति प्राप्त गर्न, इत्यादि कार्य कार्डहरू प्रयोग गर्दछ।
एकाधिकार सम्झौता किन्नुहोस्
मुश्किल कीट खेल
डेभिर - कीट खेल ...
एक कार्ड खेल जसमा खेलाडीहरूलाई वितरण गरिन्छ र तिनीहरूमध्येबाट बाहिर निस्कने पहिलो जित्छ। यो गर्नको लागि, तिनीहरूले तालिकामा रहेको भन्दा तुरुन्तै उच्च वा कम नम्बरको साथ प्रति पालो कार्ड कास्ट गरिरहनु पर्छ। र सबै भन्दा राम्रो, जित्न को लागी, तपाईले धोका दिनु पर्छ ...
Tricky Moth किन्नुहोस्
गति, अवलोकन र रिफ्लेक्सको खेल, दर्जनौं वाटरप्रूफ कार्डहरूको साथ ताकि तपाईं गर्मीमा पोखरीमा पनि खेल्न सक्नुहुन्छ। प्रत्येक कार्ड अद्वितीय छ, र कुनै पनि अन्य संग साझा मात्र एक तस्वीर छ। समान प्रतीकहरू खोज्नुहोस्, यसलाई ठूलो स्वरमा भन्नुहोस् र कार्ड उठाउनुहोस् वा छोड्नुहोस्। तपाईं5विभिन्न minigames सम्म खेल्न सक्नुहुन्छ।
यदि बोर्ड वा कार्ड खेलहरू क्लासिक हुन् भने, पासा खेलहरू पनि छन्। यहाँ केही छन् पासा खेलहरू सबैभन्दा प्रशंसित:
केरो - क्रस पासा -...
तपाईंसँग 14 पासा, 1 गोबलेट, 1 घण्टाको घडी छ, र यो हो। सुन्ने समझ, सहिष्णुता, संज्ञानात्मक कौशल सुधार गर्न पालो-आधारित खेल। तपाईंले भर्खर पासा घुमाउनु पर्छ र तपाईंसँग भएको समय भित्र लिंक गरिएका शब्दहरूको सबैभन्दा ठूलो संख्या बनाउनु पर्छ। आफ्नो बिन्दुहरू लेख्नुहोस् र आफ्ना विरोधीहरूलाई जित्नुहोस्।
क्रस पासाहरू किन्नुहोस्
पासा कप २०...
एक कप र पासा तपाईलाई प्रतिस्पर्धा गर्न र खेल्न आवश्यक छ। यो एक साधारण खेल हो, जुन तपाइँले चाहे अनुसार खेल्न सकिन्छ, तर जुन तपाइँले पासा घुमाउन र सबैभन्दा ठूला आंकडा कसले रोल गर्छ भनेर हेर्न वा बाहिर आउने संयोजनहरू मिलाउन प्रयास गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
Asmodee - स्टोरी क्यूब्स ...
यो एक परम्परागत पासा खेल होइन, तर तपाईंसँग अनुहारहरू सहित9पासाहरू छन् जुन पात्रहरू, ठाउँहरू, वस्तुहरू, भावनाहरू, आदि हुन सक्छन्। विचार पासा रोल गर्ने हो, र तपाइँ के संग आउनुभयो मा निर्भर गर्दछ, ती अवयवहरु संग एक कथा बताउनुहोस्।
स्टोरी क्यूबहरू किन्नुहोस्
Ravensburger - स्ट्राइक ...
सम्पूर्ण परिवार वा साथीहरूको लागि खेल। मन्त्र र मन्त्रहरू कास्ट गर्न मिल्दो प्रतीक संयोजनहरू फेला पार्न एरेनामा पासा घुमाएर एउटा जादुई द्वन्द्व। खेलको प्रगतिको रूपमा, खेलाडीले पासा गुमाउनेछ र आफ्नो शक्तिहरू घटाउनेछ। जसले पहिले पासा हारे त्यो हार्ने हो।
यो सिक्न सजिलो छ, तपाइँको मानसिक कौशल विकास गर्दछ, र खेलहरू छिटो छन्, किनकि यो पालो फरक पर्दैन, सबैजना सहभागी हुन्छन्। स्कोर गर्न, तपाईले सकेसम्म धेरै संख्याहरू चिन्ह लगाउनु पर्छ।
अपरिहार्य बोर्ड खेलहरूको अर्को समूह हो बोर्ड खेल। बोर्डहरू खेलको आधार मात्र होइनन्, तर तिनीहरूले तपाईंलाई थप इमर्सिभ खेल परिदृश्य प्रदान गर्न सक्छन्। केही बोर्डहरू समतल छन्, तर अरूहरू त्रि-आयामी छन् र धेरै राम्ररी सम्पन्न छन्।
स्क्र्याबल शब्दहरू बनाउनको लागि सबैभन्दा क्लासिक र रमाईलो खेलहरू मध्ये एक हो। अनियमित रूपमा लिइएको7कार्डहरूसँग शब्दहरू बनाउन तपाईंले हिज्जे र लिङ्क अक्षरहरू गर्नुपर्छ। प्रत्येक अक्षरको मान हुन्छ, त्यसैले ती मानहरूमा आधारित स्कोरहरू गणना गरिन्छ।
योजना बी खेल PBG40020 ...
यो बोर्ड गेमले तपाइँलाई तपाइँको शिल्पकार आत्मा बाहिर ल्याउनेछ, यसको टाइल्स संग उत्कृष्ट मोजेक टाइलहरू सिर्जना गर्दछ। उद्देश्य Evora को राज्य को लागी सबै भन्दा राम्रो सजावट प्राप्त गर्न को लागी छ। यो2देखि4खेलाडीहरु द्वारा खेल्न सकिन्छ, र 8 वर्ष देखि उपयुक्त छ।
Tactic Touché बालबालिका र...
सम्पूर्ण परिवारको लागि एक रणनीतिक बोर्ड खेल। स्पेनिस डेकको साथ कार्ड खेलको पुन: व्याख्या बोर्डमा परिणत भयो। के तपाइँ यसलाई एक ट्विस्ट दिन हिम्मत गर्नुहुन्छ?
Cefa खेलौना - ड्रेकुला खेल ...
८० को दशकको क्लासिक जसले पुनरागमन गर्छ। ड्र्याकुलाको महलका जिल्लाहरूमा ट्रान्सिल्भेनियाको जंगलबाट प्रेरित खेल। नराम्रा शक्तिहरू र असल टकरावका शक्तिहरू महलमा प्रवेश गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्। कसले पाउने ?
Cefa खेलौना - बोर्ड खेल, ...
सबैभन्दा पुरानो व्यक्तिहरूले पक्कै पनि यो खेल सम्झनेछन् जुन अझै पनि बिक्री भइरहेको छ। सम्पूर्ण परिवारको लागि एउटा रमाइलो खेल जसको उद्देश्य XNUMX औं र XNUMX औं शताब्दीको दौडान भूमध्यसागरको छेउमा सम्पत्तिहरू किन्न र बेच्नु हो। यस समुद्री डाकू साहसिक कार्यमा डुब्दा आफ्नो सम्पत्ति राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुहोस्।
ट्रेजर रूट किन्नुहोस्
साम्राज्य कोब्राको खोजीमा
Cefa खेलौना - डिज्नी खेल ...
शानदार र जादुई बीच सम्पूर्ण परिवारको लागि साहसिक खेल। ती शीर्षकहरू मध्ये अर्को जुन पहिले नै 80s मा खेलिएको थियो र त्यो समयका धेरै बच्चाहरूले अब आफ्ना बच्चाहरूलाई सिकाउन सक्षम हुनेछन्।
कोबरा साम्राज्यको खोजीमा किन्नुहोस्
आफ्नो आफ्नै खेल सिर्जना गर्नुहोस् ...
चिप्स, पासा, घडी, कार्ड, कार्ड, एक रूलेट व्हील, र बोर्ड ... तर सबै खाली! विचार यो हो कि तपाइँ तपाइँको आफ्नै बोर्ड खेल आविष्कार गर्नुहुन्छ। तपाईले चाहानुहुने नियमहरू, तपाई कसरी चाहनुहुन्छ, सेतो क्यानभासमा चित्र कोर्नुहोस्, मुद्रित स्टिकरहरू प्रयोग गर्नुहोस्, आदि।
आफ्नो खेल किन्नुहोस्
तिनीहरूले याद गर्न सकेनन क्लासिक बोर्ड खेलहरू, ती जो पुस्तादेखि हामी बीचमा छन् र कहिल्यै शैलीबाट बाहिर जाँदैनन्। सबै भन्दा राम्रो हो:
StonKraft सेट को ...
31 × 31 सेमी नाप्ने काठको बोर्ड, हातले कुँदिएको। कलाको काम जसले सजावटी तत्वको रूपमा काम गर्न सक्छ र तपाइँ जो कोहीसँग उत्कृष्ट खेलहरू खेल्न सक्नुहुन्छ। टुक्राहरूमा चुम्बकीय तल्लो छ त्यसैले तिनीहरू सजिलै बोर्डबाट खस्ने छैनन्। र बोर्ड फोल्ड गर्न सकिन्छ र सबै टाइलहरू समात्न बक्समा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
डोमिनोजलाई केही परिचय चाहिन्छ। यो इतिहासमा सबैभन्दा पुरानो खेलहरू मध्ये एक हो। र यहाँ तपाईंसँग प्रिमियम केस र हस्तनिर्मित टुक्राहरू सहितको उत्कृष्ट खेलहरू मध्ये एक छ। थप रूपमा, त्यहाँ खेल्ने एक मात्र तरिका छैन, तर त्यहाँ धेरै शैलीहरू छन् ...
ठोस 30 × 30 सेमी बर्च काठ बोर्ड र 40 मिमी व्यास काठ को 30 टुक्रा। चेकर्सको क्लासिक खेल खेल्न पर्याप्त छ।6वर्ष भन्दा माथिका मानिसहरूको लागि उपयुक्त एक साधारण खेल।
Parcheesi र Goose को खेल
केरो - पार्चिस र ओका ...
एउटा बोर्ड, दुई अनुहार, दुई खेल। यस लेखको साथ तपाईंसँग Parcheesi को क्लासिक खेल खेल्न आवश्यक सबै चीज हुनेछ, र यदि तपाईं यसलाई घुमाउनुहुन्छ भने हंसको खेल पनि। 26.8 × 26.8 सेमी काठको बोर्ड,4गोबलेट,4पासा, र 16 टोकनहरू समावेश गर्दछ।
Parcheesi / Goose किन्नुहोस्
बिंगो सम्पूर्ण परिवारको लागि खेल हो, सबै समयको क्लासिक मध्ये एक। स्वचालित ड्रमको साथ कार्डहरूमा क्रस आउट गर्न अनियमित संख्याहरूको साथ बलहरू जारी गर्न जानुहोस् जबसम्म तपाईं लाइन अप वा बिंगोमा पुग्नुहुन्न। र प्रतिस्पर्धात्मकता प्रवर्द्धन गर्न, तपाइँ केहि रफल गर्न सक्नुहुन्छ ...
खेलहरू - जेंगा (हस्ब्रो ...
जेन्गा एक आदिम खेल हो जुन शताब्दीयौं पहिले अफ्रिकी महाद्वीपबाट आएको हो। यो धेरै सरल छ, र सबैले खेल्न सक्छन्। तपाईंले टावरबाट काठको ब्लकहरू हटाउनु पर्छ बिना यो खस्नु पर्छ। टावरलाई सकेसम्म असन्तुलित छोड्ने विचार भनेको विपक्षीको पालो हुँदा, यो भत्कियोस्। जसले टुक्राहरू खसाल्छ उसले हार्छ।
जम्मा भएका खेलहरू
फालोमिर-400, 400 सेट...
केवल एक खेल संग बोर? के तपाइँ धेरै यात्रा गर्नुहुन्छ र तपाइँसँग भएका सबै खेलहरू लिन सक्नुहुन्न? सबै भन्दा राम्रो विकल्प यो 400-टुक्रा पूल गेम प्याक किन्न हो। सबैका लागि निर्देशन सहितको पुस्तक समावेश छ। ती सयौं खेलहरू मध्ये केही छन् जस्तै चेस, कार्ड गेम, पासा, डोमिनोज, चेकर्स, पर्चेसी, आदि।
एसेम्बल खेलहरू किन्नुहोस्
यदि तपाइँ यसका प्रशंसक हुनुहुन्छ टिभी शृङ्खलाहरू, भिडियो गेमहरू, वा चलचित्रहरू सबैभन्दा सफल चलचित्रहरू, त्यहाँ तिनीहरूको बारेमा विषयगत खेलहरू छन् जुन तपाईं भावुक हुनुहुनेछ:
ड्र्यागन बल डेक
ड्र्यागन बल एनिमेका फ्यानहरू लोकप्रिय DBZ शृङ्खलाका पात्रहरू प्रस्तुत गर्ने यस कार्ड गेमबाट मोहित हुनेछन्। तपाइँको पालोमा तपाइँको कार्ड फ्याँक्नुहोस् र विपक्षीलाई हराउन प्रयास गर्नुहोस्, प्रत्येकको शक्ति अनुसार ...
DBZ डेक किन्नुहोस्
डूम द बोर्ड गेम
काल्पनिक उडान खेल डूम ...
डूम इतिहासमा सबैभन्दा पौराणिक भिडियो गेमहरू मध्ये एक हो। अब यो यस बोर्ड खेलको साथ बोर्डमा पनि आउँदछ जसमा प्रत्येक खेलाडी तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुने सबैभन्दा नरक राक्षसहरू विरुद्ध लड्न प्रयास गर्न सशस्त्र समुद्री हुनेछ।
सिंहासन बोर्ड खेल को खेल
गेम अफ थ्रोन्स - द...
यदि तपाइँ प्रसिद्ध HBO शृङ्खलाबाट मोहित हुनुहुन्छ भने, तपाइँ यो गेम अफ थ्रोन्स-थीम बोर्ड गेम पनि मन पराउनुहुनेछ। प्रत्येक खेलाडीले ग्रेट हाउसहरू मध्ये एकलाई नियन्त्रण गर्दछ, र अन्य घरहरूमा नियन्त्रण प्राप्त गर्न आफ्नो चालाक र क्षमता प्रयोग गर्नुपर्छ। र सबै शृङ्खलाका सबैभन्दा प्रतीकात्मक पात्रहरूसँग।
गेम अफ थ्रोन्स किन्नुहोस्
हसब्रो द गेम अफ लाइफ -...
शहर र लोकप्रिय एनिमेटेड शृङ्खलाका पात्रहरू यहाँ जीवन्त हुन्छन्, यस रमाइलो बोर्डमा जहाँ तपाईं यी प्यारा पहेँलोहरूको जीवनमा डुब्नुहुनेछ।
The Simpsons किन्नुहोस्
द हिड्ने मृत ट्रिभिया
मामूली खोज द...
एक सामान्य र सामान्य मामूली खोज, यसको चीजहरू, यसको टाइलहरू, यसको बोर्ड, प्रश्नहरू सहितका कार्डहरू ... तर फरकसँग, र त्यो यो हो कि यो जोम्बिजहरूको प्रसिद्ध श्रृंखलाबाट प्रेरित छ।
Trivial TWD किन्नुहोस्
इन्डियाना जोन्स टावर
हसब्रो द टावर अफ...
साहसिक र कौशल शीर्षक, इन्डियाना जोन्स चलचित्रहरूमा सेट गरिएको, अकाटरको मन्दिर सेटिङको रूपमा। यो चलचित्रको सम्झना गर्ने तरिका जुन यसको समयको सबैभन्दा धेरै कमाउने मध्ये एक थियो।
La Torre खरिद गर्नुहोस्
नोरिस - खेल जर्मन हो ...
खेलको खेल, जुमान्जी पनि। बोर्ड गेमको बारेमा प्रसिद्ध चलचित्र अब सम्पूर्ण परिवारको लागि एस्केप कोठाको रूपमा आउँछ। रहस्यहरू पत्ता लगाउनुहोस् र यो जङ्गललाई जीवित छोड्नुहोस्, यदि तपाईं सक्नुहुन्छ ...
पार्टी र कम्पनी डिज्नी
उस्तै थप, ठेठ पार्टी एण्ड कं, नक्कल परीक्षण, प्रश्न र उत्तर, रेखाचित्र, पहेलियाँ, आदि को एक भीड संग। तर सबै सबैभन्दा लोकप्रिय डिज्नी काल्पनिक पात्रहरूको विषयवस्तुसँग।
पार्टी डिज्नी किन्नुहोस्
Diset - मास्टरशेफ, खेल ...
TVE खाना पकाउने कार्यक्रममा खेल पनि छ। Masterchef मा सेट गरिएको यो बोर्ड र लक्ष्य हासिल गर्न कार्यक्रममा आधारित क्विजहरूसँग सम्पूर्ण परिवारसँग खेल्नुहोस्।
जस्ट गेम्स पार्क जुरासिक...
यदि तपाईंलाई जुरासिक पार्क सागा मन पर्यो र तपाईं डायनासोरहरूको प्रशंसक हुनुहुन्छ भने, तपाईंले जुरासिक वर्ल्ड चलचित्रको यो आधिकारिक बोर्ड गेम मन पराउनुहुनेछ। प्रत्येक खेलाडीले एक भूमिका लिनु पर्छ, उत्खनन र जीवाश्महरू पत्ता लगाउन, डायनासोर डीएनए प्रयोगशालामा काम गर्न, डायनासोरहरूको लागि पिंजराहरू निर्माण गर्न र पार्क व्यवस्थापन गर्न।
जुरासिक विश्व किन्नुहोस्
ला कासा डी papel
स्पेनिस शृङ्खला La casa de papel ले नेटफ्लिक्सलाई जितेको छ, र विश्वभरका धेरै देशहरूमा सबैभन्दा धेरै हेरिएको मध्ये एकको रूपमा आफूलाई स्थान दिएको छ। यदि तपाईं उहाँका अनुयायीहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ भने, यो बोर्ड खेल तपाईंको भण्डारबाट हराउन सकिँदैन। टाइलहरू भएको बोर्ड जहाँ तपाईं चोरहरू र बन्धकहरूसँग परिवारको रूपमा खेल्न सक्नुहुन्छ।
स्पेस काउबॉइज अन्य...
मार्वल ब्रह्माण्ड र एभेन्जरहरू बोर्ड खेलहरूमा आइपुगेका छन्। यस खेलमा तपाईंले सुपरहीरोहरूको टोली जम्मा गर्नुपर्नेछ र थानोसलाई ग्रहलाई नष्ट गर्नबाट रोक्न प्रयास गर्नुपर्नेछ। यो गर्नको लागि, बहु-ब्रह्माण्डमा छरिएका अनन्त रत्नहरू फेला पार्नुपर्दछ।
क्लुएडो द बिग बैंग थ्योरी
इलेभेन फोर्स क्लुएडो द...
यो अझै पनि एक क्लासिक क्लुडो हो, उही गतिशीलता र खेल्ने तरिकाको साथ। तर लोकप्रिय शृङ्खला द बिग ब्याङ्ग थ्योरीको विषयवस्तुसँग।
बिग बैंग थ्योरी किन्नुहोस्
एक कि तानो
जो लम्कन्छ। अब्बा...
स्पेनिश टेलिभिजन शृंखला La que se avecina मा अब आधिकारिक खेल पनि छ। प्रसिद्ध मोन्टेपिनार भवन र यसका पात्रहरूसँग खेल्नुहोस्। यो 8 वर्ष देखि उपयुक्त छ, र 12 मान्छे सम्म खेल्न सक्छ। खेलमा चीजहरू समुदायका लागि प्रस्तावित छन्, र प्रत्येक खेलाडीले भोट गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्दछ।
तुच्छ ह्यारी पोटर
तुच्छ खोज - ह्यारी ...
ह्यारी पोटर सागाले चलचित्रहरू, शृङ्खलाहरू, भिडियो गेमहरू, र बोर्ड गेमहरू पनि प्रेरित गरेको छ। यदि तपाईंलाई उहाँका पुस्तकहरू मनपर्छ भने, अब तपाईंसँग उहाँका पात्रहरू र यस ट्रिभियामा २१ औं शताब्दीको सबैभन्दा लोकप्रिय जादूगर कथाको बारेमा हजारौं प्रश्नहरू हुन सक्छन्।
Trivial HP किन्नुहोस्
टिभियल लर्ड अफ द रिङ्स
इलेभेन फोर्स तुच्छ पूर्ण...
The Hobbit र The Lord of the Rings सबैभन्दा सफल पुस्तकहरू थिए जुन सिनेमामा सारिएको थियो। अब तिनीहरूले vieogames र निस्सन्देह, यो Trivial जस्तै बोर्ड खेलहरू पनि प्रेरित गरेका छन्। क्लासिक ट्रिभिया खेल अब यो मध्ययुगीन कट्टरपन्थी विषयवस्तुमा लुगा लगाइएको छ।
ट्रिभिया लॉर्ड अफ द रिङ्स किन्नुहोस्
स्टार वार्स सेना
काल्पनिक उडान खेलहरू -...
लोकप्रिय विज्ञान कथा गाथामा आधारित यो खेलको साथ बल र अँध्यारो पक्ष अब तपाईंको टेबलमा आउँछ।2खेलाडीहरूका लागि एउटा खेल, 14 वर्षको उमेरबाट, र जहाँ तपाईंले जेडी र सिथ बीचको पौराणिक लडाइहरूको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। पौराणिक पात्रहरू प्रस्तुत गर्ने यी सूक्ष्म मूर्तिकलाका लघुचित्रहरूद्वारा आफ्नो सेनाको नेतृत्व गर्नुहोस्।
स्टार वार्स लिजन किन्नुहोस्
एज इन्टरटेन्मेन्ट ड्युन...
किताबहरूबाट तिनीहरू भिडियो गेम र चलचित्रमा गए। Dune भर्खरै नयाँ संस्करणको साथ थिएटरहरूमा फर्किएको छ। ठिक छ, तपाईं पनि यो शानदार रणनीति बोर्ड खेल खेल्न सक्नुहुन्छ। ठूला पक्षहरू एकअर्काको सामना गर्दै, प्रसिद्ध मरुभूमि र बाँझो ग्रहको साथ, र तपाईंले Dune बाट आशा गर्नुहुने सबै कुरा।
सबै जोसँग रणनीतिक आत्मा छ र युद्ध खेलहरू मन पराउँछन्, क्याप्चर द फ्ल्याग (CTF), र यस्तै, उनीहरूले निम्न रणनीति खेलहरूका साथ बच्चाहरूको रूपमा रमाइलो गर्नेछन्:
ERA मध्य युग
ERA मध्य युग -...
ERA ले तपाईंलाई मध्ययुगीन स्पेनमा लैजान्छ, 130 लघु चित्रहरू, 36 पासाहरू,4खेल बोर्डहरू, 25 पेगहरू,5मार्करहरू, र स्कोरहरूको लागि 1 ब्लगहरू सहितको रणनीति खेल। यो महान शीर्षक संग स्पेनिश इतिहास पुन: जीवित गर्ने तरिका।
क्याटन प्लस (डेभिर...
यो रणनीति खेल बराबर उत्कृष्टता हो, सबैभन्दा धेरै बेचिएको र पुरस्कृत, विश्वव्यापी2मिलियन खेलाडीहरूसँग। यो क्याटन टापुमा आधारित छ, जहाँ बसोबास गर्नेहरू पहिलो गाउँहरू सिर्जना गर्न आइपुगेका छन्। प्रत्येक खेलाडीको आफ्नै हुनेछ, र यी शहरहरूलाई शहरहरूमा रूपान्तरण गर्न विकास गर्नुपर्नेछ। यसको लागि तपाईलाई स्रोतहरू चाहिन्छ, व्यापार गठबन्धनहरू स्थापना गर्नुहोस्, र आफ्नो रक्षा गर्नुहोस्।
यो एक उत्तम रणनीतिक बोर्ड खेल हो। यो पोस्ट-ट्वाइलाइट युद्ध युगमा आधारित छ, पुरातन लाजाक्स साम्राज्यका महान दौडहरू तिनीहरूको घर संसारमा गएका थिए, र अब त्यहाँ नाजुक शान्तिको अवधि छ। सिंहासन पुन: दावी गर्नको लागि लडाईमा सम्पूर्ण आकाशगंगा फेरि हलचल हुनेछ। जो अधिक बुद्धिमान सैन्य बल र व्यवस्थापन प्राप्त गर्दछ त्यो भाग्यशाली हुनेछ।
Twilight Imperium किन्नुहोस्
युद्ध र रणनीति खेल को एक क्लासिक। एउटा बोर्ड जसमा आक्रमण गर्न र धूर्तताका साथ आफूलाई बचाउनको लागि, शत्रुको झण्डालाई आफ्नो सेनाको 40 टुक्राको साथ विभिन्न श्रेणीका साथ कब्जा गर्न।
यो खेल यस विधाको सबैभन्दा लोकप्रिय हो। यसको साथ तपाईंले संसारलाई हावी गर्न रणनीति डिजाइन गर्नुपर्छ। 300 अद्यावधिक गरिएका आंकडाहरू, कार्डहरूको साथ मिशनहरू, र एक धेरै सावधान डिजाइनको साथ। खेलाडीहरूले सेना बनाउनु पर्छ, नक्सामा सेनाहरू सार्नु पर्छ र लड्नु पर्छ। पासाको नतिजाको आधारमा, खेलाडीले जित्छ वा हराउँछ।
Ravensburger- डिज्नी ...
के हुन्छ यदि सबै डिज्नी खलनायकहरू एक खेलमा म्याकियाभेलियन योजना बनाउन एकसाथ आउँछन्? आफ्नो मनपर्ने क्यारेक्टर छान्नुहोस् र उहाँसँग भएको अद्वितीय क्षमताहरू पत्ता लगाउनुहोस्। प्रत्येक मोडमा उत्कृष्ट रणनीति बनाउनुहोस् र जित्ने प्रयास गर्नुहोस्।
लुकआउट गेम 22160028 -...
Uwe Rosenberg बाट, यो प्याकमा9डबल-साइडेड गेम बोर्डहरू, 138 पदार्थ ढुङ्गा, 36 पोषण स्ट्याम्प, 54 पशु ढुङ्गा, 25 व्यक्ति ढुङ्गा, 75 फेन्स, 20 अस्तबल, 24 केबिन टोकन, 33 देश घर,3मल्टिप टाइल्स,9समावेश छन्। टाइलहरू, १ स्कोरिङ ब्लक, १ खेलाडीको सुरुआती ढुङ्गा, ३६० कार्डहरू र म्यानुअल। तपाईंको मध्ययुगीन फार्म निर्माण गर्न र व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुनको लागि यो विवरणको कमी छैन जहाँ तपाईं भोक विरुद्ध लड्न कृषि र पशुधन विकास गर्न सक्नुहुन्छ ...
महान युद्ध शताब्दी संस्करण
धिक्कार खेल महान ...
पक्कै पनि रिचर बोर्गको शीर्षक द ग्रेट वार, वा द ग्रेट वार तपाईलाई परिचित छ। यो Memoir 44 र Battlelore जस्तै डिजाइनर हो। यो पहिलो विश्वयुद्धको युद्धमा आधारित छ, जसले खेलाडीहरूलाई पक्ष लिन र खाडल र रणभूमिमा भएको ऐतिहासिक लडाइहरू पुन: प्ले गर्न अनुमति दिन्छ। लडाईहरू समाधान गर्ने आन्दोलनहरू र पासाहरूको लागि कार्डहरूको साथ एक धेरै लचिलो खेल।
अचम्मको दिन 7301...
उही लेखक द्वारा, यो अन्य एक उत्तम युद्ध रणनीति खेल हो जुन तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। यो समय दोस्रो विश्वयुद्धमा सेट गर्नुहोस्, सम्भावित विस्तारहरू र सामग्री विस्तार गर्न विभिन्न परिदृश्यहरूको साथ। यदि तपाइँ सैन्य रणनीति र इतिहास मनपर्छ भने, यो तपाइँलाई पन्जा जस्तै उपयुक्त हुनेछ। यद्यपि यो केहि जटिल छ ...
Imhotep: इजिप्ट को निर्माता
डेभिर - इम्होटेप, ...
पुरातन इजिप्टमा समय मा फिर्ता यात्रा। Imhotep समय को पहिलो र सबैभन्दा प्रसिद्ध निर्माणकर्ता थियो। अब यो बोर्ड खेलको साथ तपाईंले स्मारकहरू उठाएर र विरोधीहरूलाई सफल हुनबाट रोक्न आफ्नै योजनाहरू कोरेर तिनीहरूको उपलब्धिहरू मिलाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
Asmodee - किल्लाहरू ...
राज्यको अर्को मास्टर बिल्डर हुन लड्नुहोस्। तपाईंको शहर विकास कौशलको साथ कुलीनहरूलाई प्रभाव पार्नुहोस् र यस रणनीति खेलको साथ विभिन्न क्यारेक्टरहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्। तपाईंसँग छनोट गर्नको लागि प्याकमा 8 क्यारेक्टर कार्डहरू छन्, 68 जिल्ला कार्डहरू,7मद्दत कार्डहरू, 1 क्राउन टोकनहरू, र 30 सुनको सिक्का टोकनहरू।
अनलाइन र नि: शुल्क
तपाईंसँग अनलाइन बोर्ड गेमहरूको भीड पनि छ नि: शुल्क खेल्नुहोस् एक्लै वा टाढा रहेका अरूहरूसँग, साथै मोबाइल उपकरणहरूका लागि एपहरू जसमा व्यक्तिगत रूपमा नभई रमाइलो गर्न सकिन्छ (यद्यपि यसले निश्चित रूपमा यसको केही आकर्षण हटाउँछ, र प्रकाशको मूल्यमा ... लगभग राम्रो। शारीरिक खेल हो):
नि: शुल्क खेल वेबसाइटहरू
कोहो? अनुमान गर्नुहोस
मोबाइल उपकरणहरूको लागि अनुप्रयोगहरू
तपाईं पसल मा खोजी गर्न सक्नुहुन्छ गुगल प्ले आफ्नो मोबाइल उपकरणमा वा मा Apple App Store, तपाइँसँग रहेको अपरेटिङ सिस्टममा निर्भर गर्दै, निम्न शीर्षकहरू:
आईओएस र एन्ड्रोइडका लागि क्याटन क्लासिक।
एन्ड्रोइड को लागी Carcassone
iOS र Android को लागि एकाधिकार
iOS र एन्ड्रोइडका लागि स्क्र्याबल
आईओएस र एन्ड्रोइडका लागि चित्रण
आईओएस र एन्ड्रोइडका लागि चेस
आईओएस र एन्ड्रोइड को लागी हंस खेल
त्यहाँ बोर्ड गेमका दुई प्रकारहरू पनि छन्, यद्यपि तिनीहरू अघिल्लो कोटीहरू मध्ये एकमा समावेश गर्न सकिन्छ, आफैले एक स्वतन्त्र कोटी बनाउँदछ। साथै, यी हासिल गरेका छन् क्रूर सफलता, र तिनीहरूसँग यी शैलीहरूको अधिक र अधिक प्रशंसकहरू छन्:
बोर्ड खेल एस्केप कोठा
एस्केप कोठाहरू फैशनेबल भइसकेका छन् र सबै स्पेनी क्षेत्रहरूमा आक्रमण गरेका छन्। तिनीहरू पहिले नै धेरै देशहरूमा सबैभन्दा प्रिय शौकहरू मध्ये एक हुन्, किनकि यसले तपाईंलाई साथीहरू वा परिवारसँग सहकार्य गर्न र पजलहरू समाधान गर्न अनुमति दिन्छ। थप रूपमा, तिनीहरूसँग सबै प्रकारका विषयवस्तुहरू छन्, सबै स्वादहरू पूरा गर्न (विज्ञान कथा, डरावनी, इतिहास, ...)। अविश्वसनीय सेटहरू कि कोविड -19 को कारणले गर्दा गम्भीर प्रतिबन्धहरू छन्। ती सीमितताहरू वरिपरि प्राप्त गर्न, तपाईंले एक नजर लिनुपर्छ सबै भन्दा राम्रो एस्केप कोठा शीर्षक घरमा खेल्न।
सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेल एस्केप कोठा हेर्नुहोस्
जुएगोस डी रोल
अनुयायीहरू प्राप्त गर्ने सामूहिक घटनाहरू मध्ये अर्को हो भूमिका खेल्दै। तिनीहरू अत्यन्तै लत छन्, र त्यहाँ धेरै विषयवस्तुहरू सहित, तिनीहरूको एक विशाल विविधता पनि छ। यी खेलहरूले तपाईंलाई एक भूमिकामा डुबाउँछन्, एक चरित्र जुन तपाईंले उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न खेलको समयमा खेल्नुपर्नेछ।
उत्कृष्ट भूमिका खेल्ने बोर्ड गेमहरू हेर्नुहोस्
उत्तम बोर्ड खेल कसरी छनौट गर्ने
समयमा उपयुक्त बोर्ड खेलहरू छनौट गर्नुहोस् केही कुञ्जीहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। यी विचारहरूले तपाईंलाई सधैँ सही खरिद गर्न मद्दत गर्नेछ:
खेलाडीहरूको संख्या: सहभागी हुन जाने खेलाडीहरूको संख्यालाई ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ केवल2व्यक्तिहरूको लागि, अरू धेरै व्यक्तिहरूको लागि, र समूह वा टोलीहरूसँग पनि छन्। यदि तिनीहरू जोडीका लागि वा दुईका लागि हुन् भने, यो त्यति सान्दर्भिक छैन, किनकि तिनीहरूमध्ये लगभग सबै मात्र दुई व्यक्तिहरूसँग खेल्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, यदि तिनीहरू साथीहरू वा पारिवारिक बोर्ड खेलहरूको जमघटका लागि हुन् भने, यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
उमेर: यो खेल सिफारिस गरिएको उमेर प्रमाणित गर्न महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ धेरै खेलहरू छन् जुन बालबालिकादेखि वृद्धसम्म सबैका लागि हुन्, त्यसैले तिनीहरू परिवारको रूपमा खेल्नका लागि उपयुक्त छन्। यसको सट्टा, सामग्रीद्वारा केही नाबालिग वा वयस्कहरूका लागि विशिष्ट छन्।
फोकस: केही खेलहरू स्मरणशक्ति सुधार गर्नका लागि हुन्, अरूले तर्क बढाउनका लागि, सामाजिक सीपहरूका लागि, सहकारी कार्यलाई प्रवर्द्धन गर्न, वा मोटर सीपहरूका लागि, र शैक्षिक पनि। तिनीहरू नाबालिगहरूका लागि होइनन्, यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि सबैभन्दा उपयुक्त बच्चाको आवश्यकता अनुसार छनोट गर्नुपर्छ।
विषय वा वर्ग: तपाईले देख्नु भएको छ, त्यहाँ धेरै प्रकारका बोर्ड खेलहरू छन्। सबैले सबैलाई मन पराउँदैनन्, त्यसैले खरिदमा सफल हुन प्रत्येक वर्गको खेल शैली कसरी पहिचान गर्ने भनेर जान्न महत्त्वपूर्ण छ।
जटिलता र सिक्ने वक्र: यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ यदि युवा वा वृद्धहरू खेल्न जाँदैछन्, खेलको जटिलता उच्च छैन, र यो एक सजिलो सिक्ने वक्र छ। यस तरिकाले उनीहरूले खेलको गतिशीलतालाई छिट्टै बुझ्न सक्षम हुनेछन् र कसरी खेल्ने भनेर नजानेर तिनीहरू हराउने वा निराश हुनेछैनन्।
प्ले प्लेस- धेरै बोर्ड खेलहरूले तपाईंलाई कुनै पनि परम्परागत टेबल वा सतहमा खेल्न अनुमति दिन्छ। अर्कोतर्फ, अरूलाई बैठक कोठा वा खेल कोठामा अलि बढी ठाउँ चाहिन्छ। तसर्थ, घरको सीमितताहरू राम्रोसँग विश्लेषण गर्न आवश्यक छ र छनोट गरिएको खेलले वातावरणमा राम्रोसँग अनुकूलन गर्न सक्छ कि भनेर हेर्न आवश्यक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मलाई फुर्सद दिनुहोस् » सामान्य » सबै भन्दा राम्रो बोर्ड खेल कहिल्यै